MAQAAL – Wada-hadal Somaliland lala galo waa waqti lumis ! | HalQaran.com
Home Opinion MAQAAL – Wada-hadal Somaliland lala galo waa waqti lumis !
MAQAAL – Wada-hadal Somaliland lala galo waa waqti lumis !
Wada-hadal Somaliland lala galo waa waqti lumis
axmed September 5, 2019 At 21:11
War yaa lala hadlayaaa? waxa leh Somaliyaan la hadleynaa, waa hal qabiil ee Isaaq sheeganayaToban qabiil oo kalaa meesha degan, ma igaa matala, war siyaasiyiinta Somaliya matalayaa, miyaaney dalkooda sida loo kala degan yahay aqoon, waaa sad bursi waxa ay doonayaa Dowlad ay noqon karaana malaha, war bal qabiilada kale iska daaye iyagii baan dhexdooda heshiis aheyn. caqli xumaa haysa cidaas, mana aha in ahadal loo furo, hadey nabad diidaa usheega Kacaankii geeska Galkacayo ayuu soo gaarey. gacan bira iyo qax kale ayaa imaanaya iyo wax aney ka raali noqoneyn, war fariista.